Wada-hadalo Ay Yeesheen Madaxweynaha Muddo Xilleedkiisa Dhamaaday Iyo Wasiir Koowaadka Dowladda Xilgaarsiinta Soomaaliya Taariikhda Markey Ku Beegantay 21 Oktoobar – Great Banaadir
MUQDISHO (WBW: The GBM) – Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa laga sheegayaa in Xalay ay Aqalka Madaxtooyada Soomaaliya ay Kulan ku yeesheen Madaxweynaha Muddo Xilleedkiisa Dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Wasiir Koowaadka Dowladda Xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseyn Rooble, kadib markii ay Taariikhda ka gudubtay 20ka Oktoobar isla markaana ay Taariikhda u gudubtay 21da Oktoobar ee Sanadkan 2021da.
Kulankooda ayaa waxaa, sida lasoo sheegay, kasoo shaqeeyay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafatagareen), waana Kulankii ugu horeeyay oo ay yeesheen Labadooda tan iyo markii ay fashilmeen Wada-hadaladii lagu dhex-dhexaadinaayay Labadooda.
Wararka waxey ku darayaan in Kulankoodii Xalay oo kusoo beegmay 21da Oktoobar ee Sanadkan 2021da, waxeyna Labadoodaba ay Kulankooda ku muujiyeen Isu-tanasul; iyadoona lagu balamay Kulan kale inta ay Taariikhda isu bedelin 22da Oktoobar.
Dad badan oo Siyaasiin ah, isla markaana Goobjoog ka ahaa Afgembigii 21da Oktoobar ee Sanadkii 1969kii iyo Bilowgii Taliskii Kelitalisnimo ee Jeneneral Maxamed Siyaad Barre, ayaa is-weydinayo waxa Kulanka Farmaajo iyo Rooble kusoo aadiyay 21da Oktoobar, Sanadkan 2021da.
Ugu dambeysti, Warcelinta ay Siyaasiinta Demoqaraadiga ahi ay bixinayaan, ayaa waxey noqotay in Farmaajo iyo Rooble ay si dadban u xusayaan Siyaasadii Taliskii Kelitalisnimo ee Jeneneral Maxamed Siyaad Barre ee xooga ku haaystay Soomaaliya Muddada Dhan 21da Sanno iyo googo’a.